रुरु जलविद्युतको आइपीओमा हालसम्मकै दोस्रो धेरै आवेदन, कति जनाले भरे ?
प्रकाशित : 5:21 pm, मंगलबार, चैत २४, २०७७
काठमाडौं । रुरु जलविद्युत परियोजनाको प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ) मा मागभन्दा ६२ गुणा बढी आवेदन परेकोछ ।
विक्रीप्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको आइपीओमा १६ लाख ६९ हजार १९ जनाले २ करोड ३३ लाख ९० हजार ९० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छ । यद्यपि, अन्तिम तथ्यांक आइनसकेकाले आवेदकको संख्या अझै बढ्न सक्ने क्यापिटलले जनाएको छ ।
« बुधबारदेखि ज्योति लाइफको सेयर कारोबार हुने, कतिमा खुल्छ पहिलो कारोबार ?
कोरोनाका बीच हरेक १३ घण्टामा थपिए एकजना नयाँ अर्बपति, कुन देशमा कति ? »